ဘေလီဇ်ကုမ္ပဏီ & ဘဏ်အကောင့်
ဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည် ဘေလီဇ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ, IBC, 1990 ၏။ အဆိုပါဘေလီဇ် IBC အက်ဥပဒေကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ အဆိုပါ ဘေလီဇ် IBC Registry ကို အပေါ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အာဏာသောကုမ္ပဏီ (ထိုကဲ့သို့သောဒီတစ်ခုကဲ့သို့) တစ်ဦးအေးဂျင့်များ၏အကူအညီနှင့်အတူထူထောင်ခံရဖို့လိုအပ်တယ် ဘေလီဇ် IBC ဖွဲ့စည်းရေး.
ဒါကကို set up ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် ဘေလီဇ် IBC ဘဏ်အကောင့်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများရေးဆွဲထို့နောက်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီ file မည်သူ (အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိနံပါတ်များနှင့်ပုံစံများရှိပါတယ်) တစ်ဦးအေးဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည် ဘေလီဇ်ကုမ္ပဏီ Registry ကို။ သင့်ရဲ့ entity ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်သင့်ရဲ့အေးဂျင့်တစ်ဦးဖွင့်ဖို့စာရွက်စာတမ်းများပေးနိုငျ ဘေလီဇ်ကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်.
ဘေလီဇ်အတွက်ဘဏ်များကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဖြစ်ကြပြီးဘေလီဇ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအတွက်အကောင့်ဖွင့်နှင့်အတူအတှေ့အကွုံဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တိကျသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သိကျွမ်း-သင့်ရဲ့-ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကို, အတွေ့အကြုံများထဲမှအကောင်းဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်အကောင့်များတည်ထောင်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးအေးဂျင့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သငျသညျမှားအရာလို့ပြောသို့မဟုတ်ပြုလျှင်အကောင့်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါဘဏ်အကောင့်ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုမရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်များကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုသူတို့အကောင့်ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ထိုအချိန်ကာလအများစုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းသင်ပြောပြမည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အမှားများသောအားဖြင့်စိတ်ပျက်၏လအတွင်းအဆုံးသတ်ရေး, ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြေကိုသိရလိမ့်မည်အများဆုံးအကောင့်အချိန်မီအခြေခံပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ရနိုငျသညျ။ ဘယ်ဘဏ်တွေလုံခြုံရှိပါသလဲ စသည်တို့ကိုအမေရိကန်, ကနေဒါ, ဗြိတိန်, တှငျနထေိုငျသူမြားအဘို့အဘယ်ဘဏ်တွေလိမ့်မည်နှင့်မပွင့်လင်းအကောင့်? ဘယ်ဘဏ်တွေအဆင်ပြေရှိပါသလဲ သင့်ရဲ့အေးဂျင့်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မြေမြုပ်မိုင်းတည်ရှိရာရှိရာသိတယ်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ရှောင်ရှားကကူညီနိုင်သူတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိကြေးစားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဘေလီဇ်ယခင်ကဗြိတိန်ဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟုခေါ်တွင်ဗဟိုအမေရိက၏အရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေတခုတခုအပေါ်မှာလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဘေလီဇ်ဂွာတီမာလာ, မက္ကစီကိုတို့ကမြောက်ဘက်ကအနောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်ပေါ်နှင့်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အားဖြင့်အရှေ့, နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ ၎င်း၏မြေဧရိယာအကျယ် (180 ကီလိုမီတာ) (290 ကီလိုမီတာ) 68 မိုင်ဝန်းကျင်ရှည်လျား 110 မိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ခန့်မှန်းလူဦးရေ 370,000 ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေလီဇ် IBC ကောင်းကျိုးများ
အဘယ်သူမျှမအခွန်: 1990 များနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) အက်ဥပဒေအရ, အားလုံးဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ဦးစလုံးတံဆိပ်ခေါင်းခွန်ငွေပေးချေခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်အဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်းရရှိမဆိုင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ဘေလီဇ်အတွက်ရှိပါသည်။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခွန်ကောက်ခံခြင်းလိုအပ်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကသာနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အစိုးရနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်အားလုံးကိုပုဂ္ဂလိကနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းနောက်ထပ် privacy ကိုများအတွက်ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များကိုခနျ့အပျနိုငျသညျ။
ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: ဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတစ်ခုအဆင့်မြင့်ရှိသည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်, ကော်ပိုရေးရှင်းမဆိုနိုင်ငံ၏အစိုးရမဆိုပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းယူခြင်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ဒိုင်းလွှားကိုလက်ခံရရှိသည်။
လျင်မြန်စွာနှင့်ရိုးရှင်းသောထဲဆွဲသွင်းပါဝင်: တစ်ဦးကဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းတနေ့ခြင်းတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်, သင်ဘေလီဇ်တစ်ခရီးစဉ်အောင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အားလုံးမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများအီလက်ထရောနစ်တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်: ဟောင်းတစ်ဦးကဗြိတိသျှကိုလိုနီအဖြစ်, အင်္ဂလိပ်ဘေလီဇ်အတွက်တရားဝင်နှင့်မူလတန်း language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းအမည်များကိုရှိရင်းစွဲဆင်တူမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမူထူးခြားတဲ့အမည်များကိုရွေးချယ်ရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာမသုံးဗားရှင်းသူတို့ထဲကတဦးတည်းအတည်ပြုလိမ့်မည်ဟုမြော်လင့်နှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်။
ဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်တစ်ဦးကဒေသခံရုံးလိပ်စာရှိရမည်။ ဤသည်မှာလိပ်စာဖြစ်စဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်များအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်, အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့အေးဂျင့်များကထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ဒီဥပဒေအရလိုအပ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးရှိပါသည်။
ဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော် $ 50,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစံအဖြစ်အမေရိကန် $ 50,000 တန်းတူတန်ဖိုးကိုမှာပုံမှန်အား 1.00 ရှယ်ယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကပိုက်ဆံ၏ဤငွေပမာဏကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားအပေါ်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ငွေရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါဟာဆောင်းပါးများအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်နိမ့်ဆုံးမှကနဦးနှင့်နှစ်စဉ်အစိုးရအခကြေးငွေစောင့်ရှောက်။
ဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်. $ 500 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေးပေါင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့် / ရုံးအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဘေလီဇ်သူ / သူမ၏ရုံးခန်းလိပ်စာနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့စာချွန်လွှာနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ကသာနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဖြစ်က၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုသေချာနှင့်အသင်းဆောင်းပါးများအစိုးရက Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်။
ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များတိုးမြှင့် privacy ကိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နှစ်စဉ်မှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်စာရင်းစစ်တောင်းဆိုမှုများ file မှကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ဘေလီဇ်မလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
တစ်ဦးဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်း 24 နာရီထက်လျော့နည်းယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးစီးအချိန်လျှောက်ထားသူသည်၎င်း၏မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများပြီးဆုံးဘယ်လိုတိကျစွာ, အကော်ပိုရိတ်နာမတျော၏ခွင့်ပြုချက်အပေါ်မူတည်အဖြစ်။ ဘေလီဇ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးဆွဲသွင်းပါဝင် options များထဲကတစ်ခုပေးထားပါတယ်။ ရေကြောင်းအချိန်နှင့်အတူ, အရှိဆုံးနေရာလက်ခံသူများကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရက်ပေါင်း5မှ7၌သင်တို့၏လက်၌ဖြစ်ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျသညျ။
တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်မျှအခွန်နှင့်အတူစကားပြောနိုင်ငံစုစုပေါင်း privacy ကိုအခြားအစိုးရသိမ်းယူမှုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, တစ်ဦးအမြန်နဲ့ရိုးရိုးမှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရှိပြီးဖြစ်သောဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်လိုအပ်သောတစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်: အပါအဝင်ဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။